Amazwe eNetflix 'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Abadali ngeDola ye-200M yokujongana-Ngoku uza kwenza ntoni? - Itv
Eyona Itv Ngaba iNetflix's $ 200M Deal with 'Game of Thrones' Creators a Good or Bad Move?
Ngaba iNetflix's $ 200M Deal with 'Game of Thrones' Creators a Good or Bad Move?
Abadali bolawulo kunye nabavelisi be Imidlalo yeethrone , UDavid Benioff, uGeorge RR Martin kunye noDB Weiss.UJeff Kravitz / FilmMagic yeHBO
NgoLwesithathu ebusuku, Imidlalo yeethrone Abadali uDavid Benioff noDan Weiss bazisa eyabo yentengiso-ishukumisa iarhente yasimahla ukuya esiphelweni xa besayina i $ 200 yezigidi Ifilimu emininzi kunye nomabonakude ujongana neNetflix. Emva kokuchitha elona xesha lilungileyo kwi-HBO, esi sibini sinciphise ukhetho lwabo lwexesha elizayo kwiAmazon, Disney nakwinkonzo ephambili yokusasaza. Ngale ntshukumo, omnye umkhosi wamandla wokuyila ofunwa kakhulu uyasuswa ebhodini phakathi kukhuphiswano lweengalo ezikhuphisanayo zeshishini. Kusesekuseni kakhulu ukumisela iziphumo eziyinyani zesivumelwano, kodwa izigqibo ezimbalwa ngoku zinokutsalwa.
Isakhono sokulawula abavelisi bomxholo abaphezulu siya kuqhubeka ukuba likamva lamandla okusasaza, u-Eric Schiffer, i-CEO ye-Patriarch Organisation kunye nosihlalo Abacebisi kuLawulo lwegama , uxelele uMqwalaseli.
BONA KWAKHO: Imiboniso ye-HBO ezayo ye-8 enokuthi ithathe indawo ye 'Game of Thrones'
Uninzi luyavuma ukuba ixesha lokugqibela Imidlalo yeethrone washiya okunqwenelekayo kwaye loo mgangatho wabandezeleka xa uBenioff noWeiss bephelelwe ngumbhali uGeorge R.R. Isibini sokucwangciswa okungalunganga kokucwangciswa komdlalo wamakhoboka Umdibaniso (ngoku esele ifile ngokungathandabuzekiyo) ngeempazamo ezidlulileyo ezinje nge Imvelaphi ye-X-Men: iWolverine , ukusilela kwakhe kulele ngakumbi kwisitudiyo, kwaye inkxalabo yabalandeli iyavakala. Inga si Qiniseka umxholo wabo uya kuba phezulu?
Kodwa iBenioff Isixeko samasela ihlala iyeyona ncwadi intle ongazange wayifunda; Iyure yama-25 isabambe nanamhlanje njengophononongo olwenziweyo ngobuchule; kwaye i-duo isenze ukhetho oluninzi kuyo Imidlalo yeethrone ephambukile emsebenzini kaMartin ngendlela eyazuzayo kwingxelo. Mhlawumbi ayingoDavid Chase okanye uVince Gilligan, kodwa bachophela ezona ziganeko zikhulu zikamabonwakude kule minyaka ilishumi kwaye Olona chungechunge ludumileyo lwe-HBO . I-Disney ibangenise ukuze babhale kwaye bavelise okulandelayo Idabi leenkwenkwezi trilogy. Banamandla egama kwaye, yiyo loo nto, i-buzz engumbane osondeza iinjini zeenkonzo zokusasaza njengoko zihlala zifuna ukwandisa indawo yazo yokwazisa abaphulaphuli.
Iqonga lokusasaza lijolise ekukhuliseni isiseko salo ngokwenza kunye / okanye ukuthenga inkqubo etsala abaphulaphuli-ngokuchanekileyo le nto yenziwe yiNetflix ngesi sivumelwano, u-Al DiGuido, umongameli kunye negosa eliyintloko kwingeniso Ummeli we-6 we-Arhente , iarhente yezobudlelwane neziphumo, uxelele uMbonisi. Idabi lomxholo womgangatho wabathengi kunye nenkonzo yokusasaza ngokukhawuleza iba lidabi lokuthengisa lexesha lethu.
Ekugqibeleni, eyona nto ibaluleke kakhulu ekusindeni kwindawo ye-cannibalistic yokusasaza kukufumana ababhalisi abatsha kunye nokugcina esele ikho. Le yangaphambili yimveliso yenkqubo ekhethekileyo enomtsalane kwaye eyokugqibela ihlala ixhomekeke kwimigangatho yelifa elithandwayo, okanye iiruns. Ukubandakanya umxholo ophumeza ezi ziphumo zibini zeshishini kuya kuba yinto ephambili kwimpumelelo, kulula nje ngokuba, utshilo uDiGuido.
Ngaba Imidlalo yeethrone abalandeli bahendwe ngokwaneleyo lithemba leefilimu ezintsha kunye nemiboniso evela eBenioff naseWeiss yokuhlala neNetflix? Lowo ngumbuzo wezigidi ezingama-200. Njengoko konke kuxhomekeke ekufumaneni nasekugcinweni, le yayiyimidlalo yokungcakaza ekufuneka ithathiwe, ngakumbi njengoko igcina umntu okhuphisana naye ekude kude neAmazon neDisney.
I-Benioff kunye ne-Weiss zezakutshanje kumgaqo wokudibana kwetalente efumanekayo yeNetflix kwityala elingenakuphela. Bajoyina uluhlu lwangoku olubandakanya uRyan Murphy ($ 300 wezigidi), uShonda Rhimes ($ 100 yezigidi) kunye neKenya Barris ($ 100 yezigidi) -i-arhente zasimahla ezibiza kakhulu ezinethemba lokuba iNetflix inokubuyisela ilahleko ezayo yenkqubo yamathala eencwadi abukele phezulu, njenge Abahlobo kwaye IOfisi . Kodwa ngaba ilula ngokwenyani njengokutshintsha i-X ye-Y?
Akuthandabuzeki, kuba umxholo wokuqala wabadali ukhonza abaphulaphuli abaneendlela ezahlukeneyo zokubukela ezivela kwiindawo zokuhlala ezinje IOfisi , ezihlala zisetyenziswa njengohlobo lokubaleka kungenangqondo okanye 'iTV ukulala,' ucacisile uAsher Chester, umlawuli wentengiso kwintsebenzo Iarhente ngaphakathi , yinkonzo epheleleyo yentengiso yedijithali.
Isixhenxe kwimizuzu eli-10 echithwe kwiNetflix sichithwa ekubukeni umxholo onelayisensi. Ukugcina ababukeli kwikhonkco, iNetflix iya kuyo yonke into kwesi sicwangciso sexesha elide esihamba kude kwi-nostalgia yothotho oludlulileyo.
Ezi zivumelwano zibonisa ukuba ngaphandle kobunkokeli bayo bokuqala kwimarike, iNetflix kufuneka idlale ikati ukuze ikhuphisane noomatshini bokuqulatha beDisney kunye nezinye izitudiyo eziphambili ezingena kumsesane ophezulu, uDallas Lawrence, igosa eliyintloko lophawu I-OpenX , utshintshiselwano olukhulu oluzimeleyo lweentengiso zehlabathi, uxelele uMbonisi. Abadlali be-OTT abanganikezeli ngombhobho oqinisekileyo womxholo wokuqala weprimiyamu ukondla imikhwa yokubukela binge yesizukulwane sokusasaza ngokuphuhlisa i-IP enkulu okanye ukusayina ipremiyamu Italente yemveliso efana neBenioff, Weiss, Rhimes kunye neMurphy ngekhe iphumelele kwintengiso ye-OTT ethe kratya.
Nokuba ucinga ntoni malunga nexesha lokugqibela le- Imidlalo yeethrone , I-Netflix yayilungile ukulandela ngomsindo abenzi bayo. Kodwa ngelixa esi sivumelwano siphendula umbuzo omnye malunga nekamva lomqolo we-streamer, isenokungawuchaphazeli umba okhawulezayo okhawuleze iNetflix ebusweni. Lixesha kuphela eliza kuxela ukuba utyalo-mali oluzigidi ezingama-200 luguqulela kwinani lababhalisi elikhulayo. Kodwa njengoAndy Dufresne kanye utshilo , Ithemba yinto elungileyo, mhlawumbi zezona zinto zilungileyo.
Uhlaziyo 'lweNdlu yamakhadi': Yintoni esiyaziyo ngoGreg Kinnear kunye nabalinganiswa abatsha bakaDiane Lane
Ipeyinti yeHlabathi yeXabiso eliKhulu ngumfazi ohamba kwi-Display-e-Arkansas
UMsunguli we-Reddit u-Alexis Ohanian utyhila indlela yokwakha iNkampani yeTekhnoloji ngaphandle kwesiDanga seNjineli
Imibuzo emi-5 'Amanga Amakhulu Amakhulu' Ixesha lesi-2 likucela ukuba ubuze
Indlela uBill noMelinda Gates abaye bazisebenzisa ngayo iibhiliyoni zabo kule minyaka ingama-20 idlulileyo
Imbali ende yeFishnet stockings
Phakathi koMfanekiso kunye neNyaniso: Sonke Silibona Njani Ihlabathi
UChristie ubongoza isihlwele seConcord ukuba sijonge ezona ngoma zakhe zikhulu ze-YouTube
UMongameli u-Obama uyakusinda kwi-Smear yexabiso eliphantsi lika-Megyn Kelly
Phila njengoKumkani: Inqaba ye-Spa iza eManhattan
Igqwetha likaTrump uSues Fusion GPS kunye neendaba eziBuzzfeed ngaphezulu kweDossier
UMariah Carey's Yenza-ngokwakho, i-9 yezigidi zeedola, iPenthouse Triplex
UWatson Coleman: UClinton uya kunikezela ngePointpoint kwiiNgxelo zikaTrump malunga neRussia
Yeyiphi inkwenkwezi yemfazwe bhanyabhanya eyenza eyona mali
Iimuvi ezilungileyo kakhulu zokubukela phezulu
ukujonga iselfowuni ngenombolo yegama
Ingqungquthela yootitshala entsha yejezi ka-2015
Umlingisi womfazi olungileyo ixesha lesi-7
simahla ngaphandle kokufundwa kwengqondo ngomlingo
Eyona mali ifanelekileyo yokutshintshiselana kwabaqalayo